होस्टेलभित्र विद्यार्थीको मृत्युपछि तनाव – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
होस्टेलभित्र विद्यार्थीको मृत्युपछि तनाव
२०७१ चैत्र ३, मंगलवार ०२:०९ गते
खैरहनी । खैरहनी पर्सा बजार सोमबार केहीबेर तनावग्रस्त बन्यो । नेपाल आदर्श शिक्षा सदनको होस्टेलभित्रै एसएलसी तयारी गरेका एक विद्यार्थीको मृत्युको विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएपछि पर्सा बजारको स्थिति केहीबेर तनावपूर्ण बनेको थियो । एक घण्टा राजमार्गसमेत अवरूद्ध भयो ।
कठार–५ जीवनपुर घर भएका १७ वर्षका गौरव बस्नेत आइतबार बिहान नेपाल आदर्श शिक्षा सदनको होस्टेलभित्र मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । प्रहरीले विद्यार्थी बस्नेत झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको र अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको बताएको छ । विद्यालयले विद्यार्थी बस्नेतले आत्महत्या गरेको दाबी गरेको छ ।
टिसर्टले पासो लगाएर पंखामा झुन्डिएको अवस्थामा विद्यार्थीहरुले निकालेर उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लैजाँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको विद्यालयको दाबी छ । मृतकका आफन्तले विद्यालयको कुरालाई झुटो भन्दै हत्या नै भएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थी बस्नेतलाई पिटेर हत्या गरिएको मृतकका आफन्तहरुले आरोप लगाएका छन् ।
बस्नेतका आफन्तले हत्या नै भएको भन्दै दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनको क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ । घटनाको विरूद्धमा आन्दोलित बनेका आफन्त र स्थानीयले विद्यालयमा नै गएर प्रर्दशन गरेपछि तीव्र झडप भएको हो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार सेल अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो ।
मृतकका आफन्तहरुले आत्महत्या नभई हत्या भएको प्रहरीमा उजुरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले विद्यालयका दुई शिक्षकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक विन्दु पौडेल र होस्टेल इन्चार्ज सन्तोष पौडेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित पक्षले दुई जनाविरूद्ध गत आइतबार नै ठाडो उजुरी दिएका छन् ।
स्कुलमा तोडफोड हुने भएपछि प्रहरी प्रतिकारमा उत्रिएको डिएसपी राजन अधिकारीले बताए । प्रहरीसँगको झडपमा लोकबहादुर कुँवर घाइते भएका थिए । उनको उपचार भइरहेको छ । अर्का एक जना पनि झडपमा घाइते भएका छन् । वातावरण सहज बनाउन पीडितपक्षसँग नियमित सम्पर्क र वार्ता भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
पीडितपक्ष राजी नहुँदा पोष्र्टमार्टम नभएको प्रहरीको भनाइ छ । पोष्टमार्टमबाट मृत्युबारे थप जानकारी आउने हुँदा अहिले केही भन्न नसकिने चितवन प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी अधिकारीले बताए ।
‘कसरी आत्महत्या हुन सक्छ ?’
खैरहनी । म मृतक गौरव बस्नेतको बुबा टेकप्रसाद बस्नेत हुँ । मेरो छोराको आत्महत्या होइन, हत्या भएको हो । कक्षा कोठामा रगत छ, हात र खुट्टाका आंैला काटिएका छन् । ढाडमा निलडाम छन् । यो कसरी आत्महत्या हुन सक्छ ? बेलुका नै हत्या गरी बिहान झुण्डिएर आत्महत्याको नाटक गरिएको हो । एसएलसीको तयारीका लागि मैले छोरालाई विद्यालयको होस्टेलमा राखेको हुँ ।
शनिबार बेलुका भेटेर आएको हुँ उसले कसरी आत्महत्या गर्न सक्छ ? एसएलसी परीक्षा प्रथम श्रेणीमा पास गर्ने उत्साहका साथ होस्टेलमा रहेको मान्छेले कसरी आत्महत्या गर्न सक्छ ? यो हत्या हो अरु केही होइन । न्याय माग्न खोज्दा प्रहरीले अश्रुग्यास हालेर हामीलाई दमन ग¥यो । न्याय माग्दा दमन गरिन्छ भने कहाँबाट न्याय पाउने ?
छोरालाई सामान्य पेट दुख्ने समस्या रहेको थियो । शनिबार मैले आवश्यक औषधि खरिद गरेर छाडेको थिएँ । एसएलसीको डरले मेरो छोराले आत्महत्या गरेको होइन । पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गर्ने लक्ष्य लिएर अध्ययन गरेको मान्छेले कसरी परीक्षाको डरले आत्महत्या गर्छ । घटनाका दोषीलाई पत्ता लगाएर कारबाही नगरेसम्म छोराको लास बुझ्दिनँ ।
घुम्तीमा मोड्न नसक्दा खस्यो ट्रयाक्टर : ६ जनाको मृत्यु, १९ जना घाइते
कर संकलनमा कोरोना प्रभाव : एक अर्ब राजस्व जुटाउन मुस्किल
दुई करोड ८६ लाखमा बन्यो पशु आहार उद्योग